U-Isabell Kiefhaber unomdla omkhulu kwimiboniso emincinci kwimisesane | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Imiboniso emincinci kwezi zixhobo zenziwe ngu-Isabell Kiefhaber
Esandleni sethu sihlala sinethuba lokunxiba umsesane umele umanyano phakathi kwabantu ababini okanye isivumelwano semfihlo esivela kwiminyaka eyadlulayo esaziwa kuphela ngulowo usinxibileyo kunye nalowo ubanikileyo. Amabali anokuthi aboniswe ngesindululo esasungulwa ngu-Isabell Kiefhaber, umculi wezacholo osothusayo ngale mizobo yoqobo kunye neyahluke kakhulu.
Kukulo makhonkco enziwe nguKiefhaber esinokuwafumana Imiboniso emincinci ebalisa ibali elincinci okanye into eyenziwa ngumntu onxibe ngayo. Imisesane engafuneki kubunewunewu, kodwa endaweni yoko ichonge umntu onendawo encinci kunye nencinci.
Amakhonkco ayenziwe ngumculi waseJamani u-Isabell Kiefhaber kwaye anjalo iyafumaneka ukuze ithengwe kwi-Etsy. Zenziwe nge-resin kwaye nganye yazo ibonelela ngeendlela ezahlukeneyo nezincinci apho kuxelelwa into khona. Ukusuka kwinto apho isibini sidlala intenetya ukuya kwinto yendoda enxibe isuti yakhe. Kukho enye apho esinye isibini sangana esitulweni.
Nokuba uyayifuna unaso isacholo somqala apho kuboniswa ilokethi kuthotho lweegusha ezityisayo ezilalini. Izimvo zahlukile kwaye, njengoko benditshilo, azikhangeli kubunewunewu, kodwa endaweni yoko zifuna iinkcukacha ezahlukileyo ezivela kwamanye amakhonkco ngaphandle kokhangelo oluthe kratya kunolu.
U-Isabell uphawula ukuba yi Ndinomdla kuyilo kunye nomsebenzi oqinisekileyo. Ubucwebe kunye nomsebenzi wobugcisa zezinye izinto ezimbini awazidibanisayo ngokudibanisa okugqibeleleyo. Ukuba nangasiphi na isizathu awunakufumana uyilo ongathanda ngalo, u-Isabell wamkela iiodolo ke yeka i-Etsy yakho o Kwiwebhu ukunxibelelana naye kwaye umangalise umntu omthandayo ngesipho santlandlolo.
Umsebenzi ofana kakhulu ne izacholo zomgexo leli gcisa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Imiboniso emincinci kwezi zixhobo zenziwe ngu-Isabell Kiefhaber
Iprojekthi yakhe yokufota: Landela intombi yakhe kwihlabathi liphela
Abalinganiswa beDisney njengoko kubonwe nguHeather Theurer